सिड्‌नीमा रहेका ४ जना नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि -सिड्‌नीमा रहेका ४ जना नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि -
१५ चैत्र २०७६, शनिबार १२:३४ मा प्रकाशित
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको राजधानी सिड्‌नीमा रहेका ४ जना नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित भएका छन् ।
अस्ट्रेलियामा पढ्न आएका ४ जना नेपाली विद्यार्थी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको नेपाली तूतावासले पुष्टि गरेको छ । दूतावासले संक्रमित सबै नेपाली युवतीहरु भएको र उनीहरु सेल्फ क्वारेन्टनाइनमा रहेको जनाएको छ ।
यसैबीच नेपाली दूतावास अस्ट्रेलियाले संक्रमणबाट बच्नका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन नेपाली विद्यार्थीलाई आग्रह समेत गरेको छ।
शनिबार दिउँसोसम्म अस्ट्रेलियामा ३ हजार ५ सय ७३ जना मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये हालसम्म १४ जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । अस्ट्रेलियाका संक्रमित मध्ये २३ जना संक्रमितको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ ।
खोप बनाइएको भए पनी कोरोना खतम नहुन सक्छ : रिपोर्ट
यो हो, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको पूर्ण विवरण
सलह : नेपालमा आउने सम्भावना कती ? यसले कत्ति नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ ?
हेपाटाइटिस सी र एचआईभीको औषधि कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी भएको वैज्ञानिकहरूको दाबी
विदेशबाट आएका मानिसहरूसँग कोरोना मात्र हैन, यी अन्य ८ भाइरस पनि सँगै आएका छन